Paulo Dybala oo ka warbixiyay go’aankiisa kaga aadan xiisaha kaga imaanaya Manchester United %
Xiddiga reer Argantina ee Paulo Dybala ayaa daaha ka qaaday go’aankiisa kaga aadan inuu u dhaqaaqo kooxda Manchester United suuqan xagaaga, kaddib markii ay xiiso balaaran ka muujiyeen inay helaan adeegiisa.
Sida laga soo xigtay wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga kooxda Manchester United ayaa dooneysa inay hesho adeega weeraryahan cusub inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Madaxda kooxda Red Devils ayaa lagu soo waramayaa inay rajeenayaan in laacibka reer Argantina ee Paulo Dybala uu ka tago Juventus, si ay u helaan adeegiisa isla markaana ay ugu xoojistaan dhanka weerarka kooxdooda.
Wargeyskan kasoo baxa dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Manchester United ay la xiriirtay Paulo Dybala maalmihii lasoo dhaafay, si ay ugu qanciso inuu ka ciyaaro garoonka Old Trafford xili ciyaareedka cusub, laakiin ciyaaryahanka ayaa u muuqda inuusan ahayn mid ku niyad furan inay sidaas dhacdo.
Ilo wareedyo gaar ah ayaa waxay shaaca ka qaadeen in Dybala uu u jawaab celiyay maamulka Red Devils, wuxuuna u sheegay inuu doonayo inuu ku sii sugnaado kooxdiisa Juventus, si uu markale ugu muujiyo awoodiisa ciyaareed, gaar ahaan kaddib markii uu tagay Massimiliano Allegri iyo imaatinka tababare Maurizio Sarri
Barcelona Oo Damacsan In Ay Dalab Ka Geyso Xiddig U Jooga Bayern Munich , Badelka Alba Ayay U Arkaan